Kulan looga Hadlayay Dar-dar galinta Mashruuca JPLG-ga oo lagu qabtay Madaxtooyada Garowe – Radio Daljir
Kulan looga Hadlayay Dar-dar galinta Mashruuca JPLG-ga oo lagu qabtay Madaxtooyada Garowe
Juunyo 10, 2015 11:14 b 0
Arbaco, Juun 10, 2015 (Daljir) — Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 10-6-2015 aqalka madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe kullan kula qaatay agaasimayaasha Wasaaradaha Puntland ee xiriirka la leh Barnaamijka horumarinta degmooyinka Puntland ee JPLG.
Kullanka oo muddo kooban socday ayaa Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Camey waxaa uu warbixino la xiriira waxqabadka sanadkii tagey ee mashruucaa ka dhageystay agaasimayaasha Wasaaradaha ee ka qeyb-galay shirka.
Qorshe howleedka saddexda bilood ee soo socda ayaa sidookale lagu falanqeeyey shirka, iyadoona laysku raacay in waxbadan oo horumar ah laga gaaray ka faa’iideysiga Barnaamijka horumarinta degmooyinka Puntland ee JPLG.
Gebagebadii kullanka ayaa gudi loo saaray nidaamka qandaraas bixinta dawladda dhexe iyo dawladda hoose, si nidaam wanaagsan oo ay dadku u jeedaan lagu bixiyo canshuuraha si simana looga hirgeliyo dalka hay’aduhuna dardar-geliyaan shaqadooda.
Midowga Afrika oo kulan ka yeelanaya Amni darrada Qaaradda Afrika
Kulan looga Hadlayay Dar-dar galina Mashruuc aJPLG-ga oo lagu qabtay Madaxtooyada Garowe